Nepal v Scotland, Group B, ICC World Cup Qualifiers Trophy at QSC, Bulawayo, Mar 8 2018.International Cricket Council
13 PhotosGallery 08 Mar 18
Nepal v Scotland, Group B, ICC World Cup Qualifiers Trophy at QSC, Bulawayo, Mar 8 2018.
Paras Khadka of Nepal reacts after reaching his 50 during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Scotland v Nepal at Queens Sports Club on March 8, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Sompai Kami (L) of Nepal is run out by Richie Berrington (unseen) of Scotland during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Scotland v Nepal at Queens Sports Club on March 8, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Paras Khadka (R) of Nepal plays a shot during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Scotland v Nepal at Queens Sports Club on March 8, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Stuart Whittingham (3rdL) of Scotland celebrates with teamates after taking the wicket of Dipendra Airee of Nepal during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Scotland v Nepal at Queens Sports Club on March 8, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Stuart Whittingham (L) of Scotland celebrates taking the wicket of Dilip Nath of Nepal during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Scotland v Nepal at Queens Sports Club on March 8, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Stuart Whittingham (2ndL) of Scotland celebrates with teamates after taking the wicket of Dipendra Airee of Nepal during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Scotland v Nepal at Queens Sports Club on March 8, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Lalit Rajbanshi of Nepal is bowled out by Ali Evans (unseen) during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Scotland v Nepal at Queens Sports Club on March 8, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Sandeep Lamichhane of Nepal is bowled out by Ali Evans (unseen) during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Scotland v Nepal at Queens Sports Club on March 8, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Lamichhane celebrates taking the wicket of Berrington
Kyle Coetzer (L) of Scotland reacts after reaching his 50 during the ICC Cricket World Cup Qualifier between Scotland v Nepal at Queens Sports Club on March 8, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Scotland players and staff celebrate after the ICC Cricket World Cup Qualifier between Scotland v Nepal at Queens Sports Club on March 8, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).
Kyle Coetzer of Scotland with his Player of the Match award the ICC Cricket World Cup Qualifier between Scotland v Nepal at Queens Sports Club on March 8, 2018 in Bulawayo, Zimbabwe (©ICC).